I-OCTOPUS studio - I-Airbnb
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguPaola
Yonwabela amava anesitayile kule ndawo yokuhlala inomtsalane, ilungele isibini: epholileyo, eqaqambileyo kwaye yanamhlanje. Indawo emangalisayo kwindawo yabucala kunye namanyathelo ambalwa ukusuka kwiziko, iilwandle kunye neendawo ezinomdla. Ukhululekile ukuhlala ixesha elide kunye nokusebenza ngocingo. I-Wifi yasimahla, A/C. Ikhitshi.
Ithafa elikhulu elenziwe ngamaplanga elijikelezwe yindalo echulumancisayo, lilungele ukuziqhelanisa neYoga kunye nokuphumla.
Kumgangatho osezantsi nje ukuba ungene unekhitshi elinesiqithi ngasekunene kwakho. Ngaphambili, igumbi lokuhlala elinesitulo esikhululekileyo kunye netafile yokusebenza ivula kwithafa elineengcango ezinkulu kunye eziqaqambileyo zaseFransi.
Igumbi lokuhlambela ngasekhohlo linocango lwebhari kunye neleli ukuya phezulu.
Phezulu yibhedi enomandlalo wendlovukazi yamathambo, i-nightstand kunye nomququzeleli wamaplanga.
I-Octopus yindawo yokuhlala yangasese ehlala kwindawo ephakathi kunye neyodwa ngexesha elifanayo, kwindawo ezolileyo, yasemaphandleni (iinkukhu zabamelwane ziya kuba ngowokuqala ukubulisa!) Kwaye amanyathelo ambalwa ukusuka e-Santa Catalina beach, abakhenkethi kunye namaziko of diving.